​यी हुन् नेपाली कला र साहित्यमा सफल, फरक क्षमता भएका ब्यक्तिहरु ।
Sat Feb 25, 2017 Studio Time: 17:22:34
For See Network हेर्नकै लागि
Jhamak Ghimire Samman
Prachanda Le Chinenan Dipa Lai
Jhamak Ghimire Samman - Babu Bogati
Modi Ko Poshak Ma Dipak
Nischal Bihe Gardai
Pojana Chocolate Baddai
Hot Scene Dina Tayar
Rakha Thapa Netri Bandai
Jau Hida Pokhara
Surjana KC Ka Secret
Rekha Ko Jau Hida Pokhara
Natak Ka Kalakar - Star Hoina
Sobit Ra Salon Ko Jodi
Film Copy Gareko Hoina
यस्ता छन्, तरकारीबारे साह्रै रमाइला तथ्य ।
यी हुन् साइतमा नराम्रो असर पार्ने ७ कुरा
यीनै ७ कारण जसले तपाईंको सम्बन्धलाई टाढा टाढा बनाउँदै लैजान सक्छन् ।
किन छोराछोरीको बाउ बन्न सकेनन् दिलिप कुमार ? के छ कारण ?
काजोलले किन गरीन् कृतीको रिस ?
दिलवालेको २००० करोड कमाउने क्षमता छ - शाहरुख खान ।
सन् २०१५ मा विवाह गर्ने बलिउड सेलिब्रेटीहरु
रितेश फेरि पिता बन्दै , गर्भवती भईन् जेनेलिया ।
विश्वका ६ धनि अभिनेता । कस्को सम्पती कती ।
आमा बनिन् रानी, के राखिन् सन्तानको नाम ?
काजोल र शाहरुख साँच्चीकै पती –पत्नी हुन् -बरुण धवन ।
८० बर्ष भए धमेन्द्र, पढ्नुहोस् उनका चर्चित डायलग ।
प्रेम चोपडाका ज्वाँई हुन् शरमन । बलिउडका चर्चित सेलिब्रेटी ज्वाँईहरू ।
सलमानको फिल्म छाडेर मिस युनिभर्समा उर्वसी ।
अभागी कगंना पाँच जनासँग प्रेम तर अहिलेसम्म एक्लै ।
फिल्मी क्षेत्रमा आउन कसैले घर छाडे, कसैले विवाह तोडे ।
यी हुन् टेलिभिजन दुनियाका महंगा अभिनेत्री ।
तेरे नाम देखी हेट स्टोरी ३ सम्म डेजी शाह ।
लोडसेडिङ बढ्यो भन्दै यसरी रोए शाहरुख, भाइरल बन्यो भिडियो । (भिडियोसहित)
बिगबोसको घर जेल भन्दा कम छैन ः रीमी सेन ।
Radio Audio Program
Khuldulee.Com [ Listen ] [ Download ]
Super Fast [ Listen ] [ Download ]
Magic Box [ Listen ] [ Download ]
Filim Filili [ Listen ] [ Download ]
Chiya Chautari [ Listen ] [ Download ]
Latte Baba Musical Show [ Listen ] [ Download ]
मंसिर १७, कठमाण्डौँ ।
अपाङ्गता असक्षमता होईन । तर, हामीकहाँ अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई बिभेद गर्ने चलन अझै हटिसकेको छैन । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण, गरिने ब्यवहार र अपाङ्गमैत्री संरचनामा धेरै परिवर्तनहरु खाँचो छ । अभाव र समस्याकाबीच अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले परिवार , समाज र राष्ट्रका लागि आफुले सक्ने योगदान दिईरहेका छन् । केही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत छन् ।
जीवन काँडा की फूल ? साहित्यकार झमक घिमिरे भन्छिन्–जीवन फूल हो । काँडाहरु हुन्छन्, पन्छाउन जान्नुपर्छ । झमकको आत्मकथात्मक कृति जीवन काँडा की फूल पढेपछि, लाग्छ जीवन त साँच्चै फूल नै हो । काँडाहरु पनि हुन्छन् –पाईला पाईलामा घोच्ने । तर, त्यही अप्ठ्यारो भित्र रहेर आफुलाई कसरी फुलाउने भन्ने महत्वपूर्ण रहेछ । झमकलाई पढिसकेपछि, धेरैले भनेका छन्– मैले बल्ल जीवन बुझेँ । झमक यो कृतिसँगै संकल्प, मान्छे भित्रका योद्धाहरु, अवसान पछिको आगमन,आफ्नै चिता अग्निशिखरतिरका लेखक हुन् । सम्झनाका बाछिट्टाहरु, क्वाँटी संग्रह पनि उनैले लेखेका हुन् । उनी चोटिला कवितामार्फत जीवन लेख्छिन् । र जीवन सँधै अप्टठ्यारो र अँध्यारो मात्रै छैन है, भनेर पाठकलाई बुझाउँछिन् । उनले लेखेका कविताहरु झमक घिमिरेका कविताहरु संग्रहमा पढ्न पाईन्छ । पाठक र समालोचकले खुब रुचाएको, उनको कृति जीवन फूल की काँडाले २०६८ सालको मदन पुरस्कार पाएको छ । उनी नै मदन पुरस्कार पाउने, पारिजात पछिको दोस्रो महिला हुन् । आफैँले भोगेको जीवन , आफ्नो साहित्यमा उतार्ने झमकका रचनाहरु यथार्थपरक छन् । उनी भन्छिन् म कष्ट र पीडालाई हाँसीहाँसी सहनेहरुको कथा लेख्छु । उनी अन्य साहित्य रचनासँगै कान्तिपुर दैनिकमा स्तम्भ लेख्छिन् । जुन, रुचाईएको स्तम्भभित्र पर्छ । उनका आफ्नै समस्याहरु छन् । तर, साहित्य क्षेत्रमा सक्रियता रत्तिभर पनि कम भएको छैन । उनी यो फूल जस्तो जीवन पाठकहरुलाई समर्पण गर्न चाहन्छिन् ।
झमकले नेपाली साहित्य क्षेत्रमा दिएको योगदानको सायदै वर्णन गर्न सकिन्छ । उनले सिकाएको अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो–अपाङ्गता र प्रतिभा फरक कुरा हुन् । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई कसैले कमजोर सोच्छ भने त्यो गलत हो । उनले यो कुरा बुझाउन परिवारैदेखि संघर्ष थालिन् । २०३७ सालमा धनकुटामा, जन्मिएकी झमक जन्मिदै अस्वथ थिईन । प्रतिमतिस्क रोग–सेरब्रल पल्सीको शिकार बनेकी उनलाई यी उत्कृष्ठ कृतीहरु लेख्नु सायद कुनै बेला सपना थियो । एउटा अप्ठ्यारो सपना । उनको लुलो हात गोडा र अशक्त शरीरको धेरैले खिल्ली उडाए । त्यसमाथि गरीबी थियो उनको दुश्मन । कति छाक भोकै बस्ने परिवारमा जन्मिएकी झमकलाई गाउँमा त्यसबेला मुर्कुुटा भनिन्थ्यो । पढ्न, लेख्न खोज्दा उनी पिटिन्थिन् । तर, उनको सपना थियो–अक्षर चिन्ने । अक्षर लेख्ने । अनि सपना थियो–मनको पीडा सबै लेख्ने । र त्यो उनले पूरा गरिन् । बालापनमा घरबाटै भएको बिभेद । गाउँकाले गरेको दुब्र्यबहार । बर्षौँ एकैथलामा बस्नुपर्दाको पीडा सबै लेखिन् । र प्रमाणित गरिन्–जीवन फूल हो । उनी भन्छिन्–काँडालाई फूलमा बदल्ने ईच्छाशक्ति संगाल्नुहोस् । जीवन अवश्य फुल्नेछ ।
प्रिय तिम्रो सिउँदोमा सिन्दुर भर्न देऊ..यो गीत अझै धेरैले गुनगुनाउँछन् । यो मीठो स्वर प्रकाश तिमल्सिनाको हो । २०४४ सालमा जन्मिएका प्रकाशले, यससँगै दर्जनौँ गीत गाएका छन् । उनी साउथ एसिएन स्टार नेपालका बिजेता हुन् । उनी भारतमा भएको यसै प्रतियोगीताको फाईनलिस्ट हुन् । उनले त्यस प्रतियोगीतामा, बेस्ष्ट ईङिलस स्पिकिङको उपाधी पनि पाए । दुईवटा आफ्नै एल्बम निकालिसकेका प्रकाश नेपालीसँगै, हिन्दी र अंग्रेजी भाषाका गीतहरु पनि गाउँछन् । नेपालसँगै दक्षिण एसियामै लोकप्रिय प्रकाशले औपचारिकरुपमा संगित भने सिकेका छैनन् । आर्थिक अभावका कारण,संगितसम्बन्धी औपचारिक तालिम लिन नसकेपनि उनले आफुलाई सांगितिक उद्योगमा अग्र पंक्तिमा राखिसकेका छन् । उनको सुमधुर स्वर र सयौँ फ्यानले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ ।
कालो चस्मा नछुटाउने,सँधै चिटिक्क परेर हिड्ने, मीठो स्वरले मन्त्रमुग्ध पार्ने प्रकाश दृष्टिविहिन हुन् । उनी बाहिरी संसार देख्न सक्दैनन् । तर, उनको कल्पनाशक्ति अद्भुत छ । उनी कल्पना गरेकै भरमा, बढो मीठो संगित सिर्जना गर्छन् । मीठो स्वरमा गाउँछन् । उनी स्टेजमा, भावमा डुबेर गाउँदै गर्दा, कसैलाई भान हुँदैन की उनी आँखा देख्दैनन् ।
२०४५ सालमा भुकम्प आयो । कोशीटप्पुको प्रकाशपुरमा रहेको उनको घरमा पनि भुकम्प गयो । भुकम्पले त केही गरेन । तर, त्यसैबेला आएको बाढीले उनको घर बगायो । एकबर्षको बालक प्रकाशले, त्यसैबेला बुवाआमा गुमाए । उनलाई पनि बाढीले बगायो । भाग्यमानी प्रकाश माझीको जालमा परे र बाँचे । उनी संयोगवश आफ्नै मीतबुवाको जालमा परेका थिए । पछि, हजुरआमासँग भेट भयो । उनै हजुरआमाले मागेर पालीन् प्रकाशलाई । दशथरी मानिससँग हात पसारेर भए पनि उनको हजुरआमाले प्रकाशको आँखाको उपचार गराईन् । तर, नहुनु थियो । प्रकाशले गुमाएको ज्योती फर्केन । उनी भन्छन्–जीवन कहिलेकाही चलचित्र झैँ लाग्छ । मैले आँखाको ज्योती नपाएपनि जीवन पाएँ । गुमिसकेको जीवन मैले सायद त्यसै पाएको होईन । केही गरेर देखाउन पाएको हुनुपर्छ । त्यसैले, पुर्नजीवन पाएका प्रकाशले आफ्नो सपनालाई साकार पार्न मेहनत गरे । कमजोर आर्थिक अवस्था, दृष्टिबिहिन–यीनै समस्यालाई उनले शक्तिको रुपमा लिए । मेहनत जारी राखे । संगितको क्षेत्रमा आए । र उदाए पनि । उनी अहिले नेपाली सांगितिक क्षेत्रका उम्दा गायक हुन् । उनले सांगितिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको कदरस्वरुप दुई पटक राष्ट्रिय सम्मान पनि पाईसकेका छन् ।
जब गीत बज्छ, रोमा न्यौपानेका शरीर उत्साहले उसै नाच्न थाल्दछ । संगितले उनको शरीरमा छुट्टै उर्जा दिन्छ । उनी एउटा खुट्टा नभएको कुरा भुलिदिन्छिन् र छमछमी नाच्छिन् । नेपाली नृत्य क्षेत्रमा रोमाको बेग्लै पहिचान छ । उनी, भ्याएसम्म आएका निमन्त्रणालाई अस्विकार गर्दिनन् । सानो नानी काखीमा च्यापेरै भए पनि स्टेज पुग्छिन् । र, जादुमयी नृत्यले दर्शकको मन जित्छिन् । देशैभर र विदेशमा गरी उनले, अहिलेसम्म हजारौँ स्टेजमा आफ्नो कुशल नृत्यकला प्रस्तुत गरिसकेकी छिन् ।
रोमाले ८ बर्षको कलिलो उमेरमा खुट्टा गुमाईन । ओभरस्पिडमा आएको गाडीले उनको एउटा खुट्टालाई, अपाङ्ग बनाई छाड्यो । केटाकेटी छँदा त उसलाई आफ्नो एउटा खुट्टा नभएको भनेर खासै चिन्ता भएन । तर, जब किशोरावस्थामा पुगिन् । रहरहरु बढ्दै गए । उनी पनि आम किशोरीहरु झैँ खुल्ला संसारमा पर पर जान चाहन्थिन् । खुट्टा नभएकै कारण चाहेको काम गर्न नपाउनु र अरुले गर्ने बिभेद सहनु कम पीडादायी थिएन । तै पनि उनी आफुलाई केही न केही काममा ब्यस्त राख्न खोज्थिन् । कहिले स्विटर बुन्थिन् । कहिले कम्प्युटर सिक्थिन् । सानै उमेरदेखि कुँजिएर बस्नुपरेको रोमालाई छमछमी नाच्ने रहर भने पुगेको थिएन । उनी नृत्य सिक्न थालिन् । बिस्तारै उनको नृत्यको प्रशंसा हुन थाल्यो । कार्यक्रमहरुमा नाच्न थालिन् । र आफुलाई कुशल नृत्यङ्गना भएको सावित गरिन् । एउटै खुट्टाले पनि नाच्न सक्ने प्रमाणित गरिन् ।
उनी अहिले आर्थिक हिसाबले केही सक्षम भएकी छिन् । घरमा, सहयोगी श्रीमान् छन् । तर, उनले अपाङ्ग भएकै कारण भोग्नुपरेको बिभेद र शोषण भुलेकी छैनन् । त्यसैले उनले अपाङ्गता भएको ब्यक्तिहरुलाई केही सहयोग गर्ने हेतुले रोमा फाउण्डेसन खोलेकी छिन् । अपाङ्गता बोझ होईन । घरपरिवार र समाजबाट सहयोग पाए आत्मनिर्भर हुनसक्छन् भन्ने देखाउन उनको प्रयास जारी छ । उनी भन्छिनम्– अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आएको छ । तर प्रयाप्त भने छैन ।
सगरमाथा चढ्नु सानोतिनो काम होईन । हामीलाई लाग्छ– त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो हिम्मत चाहिन्छ अनि सँगै शारीरिक सबलता । तर, सुदर्शनको शरीरिक सवलताको कुरा गर्ने हो भने, उनको दुईटै हात छैन । उनले सन् २०१३ मा सगरमाथा चढेर, आत्मविश्वास भए, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले पनि सोचे भन्दा फरक काम गर्न सक्ने पुष्टी गरिसकेका छन् । त्यसअघि नै उनले याला र रामदुङ हिमाल चढिसेकेका थिए । रामेछापमा जन्मेका सुदर्शनले बाल्यकालमै हात गुमाएका हुन् । दुबै हात नहुँदा उनले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । तर, उनलाई अपाङ्गता असक्षमता होईन भन्ने लाग्छ । यही कुरा पुष्टी गर्न उनले लेखे, पढे । संसार बुझे । सगरमाथा चढे । उनले चलचित्र हिम्मतवालीमा पनि अभिनय गरेका छन् । दुबै हात नभए पनि उनी आफ्ना दैनिक कामहरु आफैँ गर्छन् । मेरा हात छैनन् । मैले मागेर खानु पर्छ । यस्ता मान्छेलाई समाजले के भन्लान् भन्ने उनलाई कहिल्यै लाग्दैन ।
झमक, प्रकाश, रोमा र सुदर्शनहरु प्रतिनीधी पात्र मात्रै हुन् । हाम्रै घरपरिवार र समाजमा अपाङ्गता भएका धेरै ब्यक्तिहरु छन् । उनीहरुले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नै परिवार र समाजलाई पु¥याईरहेको योगदान अतुलनीय छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई हेर्ने धारणामा केही परिवर्तनहरु आएका छन् । तर, प्रयाप्त भने छैन । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु अझै कल्पनै गर्न नसकिने जीवन बाँचिरहेका छन् । अपाङ्गता असक्षमता कहिल्यै होईन । अन्र्तराष्ट्रिय अपाङगता दिवसको सुभकामना ।
तपाई Facebook, Twitter र Youtube मार्फत हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ । Post Comment
परिक्षामा यस्तो उत्तर दिएपछि जाँच्ने मान्छेपनि हाँसेको हाँसेई (उत्तर सहित)
लोक गायिकाको देश विदेशको घुमाई अपत्यारिलो कमाई
फेसबुकमा भेटिएका पढ्दै रमाईला लाग्ने १९ स्टाटसहरु
​सफल हुन चाहनेले थाहा पाउनु पर्ने ३४ चर्चित व्यक्तिको विगत ।
खुट्टाको औलाको आकार बाट थाहा पाउनुस् अरुको स्वभाव ।
​रेखालाई सबिनको प्रस्ताव “यहि जुनीमा मेरी बनन” (भिडियोसहित)
अर्को एक्सन फिल्म खेल्दै राजेश हमाल
सुँगुर बोकेर रातो घर घुम्दैछन् तक्मे बुढा ? (भिडियोसहित)
प्रेमगीतले देखायो सुन्दर प्रकृति र मायाप्रेमको मनमोहक दृश्य, हेर्नुहोस अवश्य (भिडियोसहित)
सुनिल गिरीको लेकाली माया यस्तो ।
© 2017 Radio Audio. All Rights Reserved. Site by SoftNEP
Radio Audio Live